Daawo:Taallooyinka Muqdisho iyo Shqsiyadda Madaxweyne Farmaajo – KHAATUMO NEWS
Daawo:Taallooyinka Muqdisho iyo Shqsiyadda Madaxweyne Farmaajo
Madaxweyen Farmaajo ayaa qorsheynayo inuu dib u daah-furo qaar ka mid ah taallooyinka ugu waa weynaa magaalada Muqdisho, oo dayactir lacag badan lagu bixiyey ay dowladdiisa ku sameysay.
Taallooyinka dib loo soo celiyey ama ay dowladda dayac-tirtay ayaa kala ah: Taallooyinka Sayidka, Xaaw Taako, Axmed Gurey, SYL iyo Dhagaxtuur oo ku teedsanaa KM4 ilaa Isgoyska Tiyaatarka.
Dadkan qaarkood ayaa ah kuwa halyeynimadooda dood la geliyo, balse taas waa sheeko kale oo dheer.
Inkasta caadiyan xariga laga jaro un goobaha cusub ee la furayo, ee aan sidaas la yeelin goobo ama taalooyin aan cusbeyn oo la dayac-tiray, haddana madaxweynaha ayaa uga faa’ideysanaya inuu ku sheego qeyb ka mid ah waxqabadkiisa.
Dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo, ayaa go’aan ku gaartay in ahmiyadda waxqabadkeeda ku saleyso inta magac iyo ka-hadalka bulsho ee ay ku kasban karto, intii ay ku jaan goyn lahayd inta qof ee ka faa’iideysan karta.
Waxaa hadda baraha bulshada ka socda olole xooggan oo ay wadaan shaqaalaha Villa Somalia iyo shaqsiyaadka ku xiran ee adeegsada facebook iyo twitter-ka oo aad u weyneynaya arrinatan kana dhigaya inay ka macno tahay dib usoo noolaanshaha dowladnimadii Soomaaliya.
La-yaab ma leh, oo waxay ka faa’iideysanayaan dadka Soomaaliyeed ee badankood ah dad dareenka markaas ay qabaan ku fal-celiya ee aan wax cabiran, kalana garan wixii saxda ahaa iyo wixii qaldanaa.
Tan ugu yaabka badan ayaa ah in madaxweynaha uusan labada taallo ee ugu dhow Villa Somalia ee SYL iyo Sayid tagi karin, ayada oo aan loo xirin dhammaan jidadka ka ag dhow, oo aan baabuur xabadda aysan karin lagu qaadin, haddana uu doonayo inuu sheegto inuu soo celiyey dowladnimadii.
Dib usoo noqoshada dowladnimada dal, waxaa astaan u ah bulshada oo hesha kala dambeyn iyo nidaadm caddaalad, amni, waxbarasho iyo caafimaad, kuwaas oo midna aysan shacabka Soomaaliyeed haysan.
Madaxweyne Farmaajo, wuxuu talada hayaa laba sano iyo bar, waxaa is-weydiin mudan.
1 – Ma jiraa hal isbital oo dowladdiisa ay u dhistay shacabka oo uu sheegi karo?
2 – Ma jiraa hal iskuul oo dowladdiisa ay dhistay oo waxabarsho bilaash ah laga helo?
3 – Ma jiraa hal ceel biyood oo ay u qodday boqolaalka maalin kasta abaaraha ugu dhimanayaan gobollada dalka qaarkood?
4 – Xitaa ma jiraa hal MCH oo dowladda madaxweyne Farmaajo ay dhistay?
14-kii bishan waxa uu xitaa madaxweynaha awoodi waayey inuu tago goobtii uu ka dhacay qaraxii ugu weynaa Soomaaliya ee boqolaalka qof lagu dilay isaga oo dalka madaxweyne ka ah, sababtoo ah amnigiisa ayuu u baqay.
Maa lacagaha lagu qarash gareynayo taallo xilligan la dhiso shacabka wax loogu qabto, maa lagu sugo amniga, oo mushaharka loogu kordhiyo ciidamada gaajaysan.
Madaxweyne Farmaajo waa inuu kala doortaa laba mid 1 – In laba ama saddex maalmood kadib laga amaano Facebook iyo twitter kadibna la hilmaamaa, iyo 2 – Inuu ka tagaa taariikh iyo dhaxal weligeed la xuso. Haddii uu doonayo tan labaad ha sameeyo waxa dadka ay dareemi karaan.
W/Q: Cabdiraxiim Axmed Xaaji
Previous Post: Daawo:Wasiir Sabriye oo mar kale gaaray Dhuusamareeb
Next Post: Warbixin:-“Dhulbahante Loo Tashaday Isna Sii kala Tashaday”